पाँच दिनमै बिचरालाई ‘कालापानी’ « Jana Aastha News Online
पाँच दिनमै बिचरालाई ‘कालापानी’
प्रकाशित मिति : २२ माघ २०७३, शनिबार ०५:२९
आफूले भनेअनुसार नचल्ने, कानुन–नियम र परिधिभित्र रहेर काम गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई दलका नेताले कसरी भकुण्डो बनाउँदा रहेछन् भन्ने एउटा सटीक प्रमाण फेला परेको छ । भोजपुर पुगेको मान्छेलाई तारन्तार फोन गरियो, ‘ल तपाईंलाई सचिव बनाउँदै छांै ।
काठमाडौं आइहाल्नुस् ।’ ७ माघमा उनले सचिवको जिम्मेवारी पनि पाए । बीचमा बिदा पर्दा खास काम हुनै पाएन । १५ गते उनी त्यो मन्त्रालयबाट फालिए । बीचका ५ दिनमा जम्मा दुईवटा मात्र फाइल अघि बढाउन भ्याए । यसरी वल्लो घाट र पल्लो तीर दगुर्न बाध्य पारिएका कर्मचारी हुन्, रक्षा र लोकसेवा आयोगजस्ता महत्वपूर्ण अड्डामा काम गरिरहेका राजीव गौतम । उनीमाथि किन यस्तो गरियो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कमलशाली घिमिरे नाम गरेका एक जना मान्छेलाई गुण लगाउनु रहेछ । केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भ¥याङमा कोट फुकालेर हल्लाउँदै नाच्ने घिमिरेलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा पठाउने वचन थियो । तर, भागबण्डाको कारण प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्न सकेनन् । अनि उनैको इच्छा तृप्त गर्न कानुन मन्त्रालय पठाइयो ।
यसरी घिमिरेलाई खुशी पार्दा गौतमले लखेटिनुप¥यो । राजीवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्क्याइएको छ । राजीवसँग कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक रिसाउनुको अर्को पनि कारण रहेछ । त्यो हो, त्यही मन्त्रालयमा उपसचिव छन् मन्त्रीको भाइभतिज खलकका गणेश नायक । कानुन आयोगको टिमसँगै श्रीलंका पुगेर भर्खरै आएका उनलाई ‘नेगोशिएसन स्किल’ सँग सम्बन्धित एउटा तालिममा भाग लिन अष्ट्रेलिया पठाउने रहर मन्त्रीले गरे । तर, त्यसअघि नै विनोद भट्टराई र हुमबहादुर केसीको मनोनयन भइसकेकाले सचिवले मन्त्रीले अह्राएको काम गर्न सकेनन् । बरु नायकलाई जापानमा दुई वर्ष पढ्नका लागि सिफारिस गरिदिए । यसरी १५÷२० दिनको कार्यक्रममा कसलाई पठाउने ? बोर्डमा को जाने ?
विदेश मनोनयनमा कसलाई पार्ने ? जस्ता काममा पनि मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न थालेपछि गौतमले मुखै फोरेर भनिदिएका थिए, ‘बरु कर्मचारीको बिदा स्वीकृत पनि हजुर आफैं गर्नुस् ।’ यसरी आफ्नो इशारामा ननाच्ने र विधिसम्मत ढंगले चल्ने लक्षण देखाएपछि मन्त्री नायकले यो मान्छे त पूर्वसचिव टेकप्रकाश ढुंगानाभन्दा पनि बाउँठिएको पो रहेछ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरेको बताइन्छ । अहिले कानुन मन्त्रालय सर्वोच्च अदालतबाट आएका २४ ‘घ’ को पानी बढुवावाला अधिकृत भेषराज कोइराला र सुब्बा हरि भट्टराईको इच्छाअनुसार चल्ने गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।